Ukuzivocavoca, Ukuchonga kunye nolwazi lweGolf Fitness
Isikhokelo seGolf Fitness
Impilo yeGalofu. Amagama amabini ongakholelwa ukuba uya kuhamba kunye xa ubone abantu abaninzi bebhiya abagibele iinqwelo. Kodwa ukufaneleka kwegalufu kubalulekile kubadlali begalufu abafuna ngokwenene ukuphucula imidlalo yabo - kwaye bafuna ukuphucula ubuchule babo. Ngenxa yokuba ukugulisa igalofu kuthetha ukujongana nemiba yamandla, ukulungelelanisa, kunye nokulinganisela. Ukunyamekela ingqondo yegalufu kunokuphucula amanqaku akho.
Kwakhona zidweliswe apha ngamanqaku eenkcukacha ngezibonelelo zegalufa kunye neminye imiba ephathelele galufa njengomsebenzi wenyama.
Qikelela ukuba? Igalofu Ilungile Kuwe
UMichael Dodge / u-Stringer / Getty Izithombe zeMidlalo / i-Getty Izithombe
Eli nqaku lixubusha uphando lwezenzululwazi oluzama ukulinganisa ukuba zingaphi iikhalori kwaye zingaphi iikhilomitha zihamba ngexesha lokujikeleza kwegalufa. Uphononongo luye lwajonga indlela ukuhamba kunye nokukhwela - kunye nendlela ophethe ngayo isikhwama sakho ngokusebenzisa inqwelo ye-push okanye i-caddy-ithintela amanqaku e-golfer's score. Kaninzi "
Ukuhamba Igalofu: Kutheni Ukuhamba Kunokuba Uhambe Ngayo Unokukunceda Impilo Yakho kunye neMaphu
Kuyafana nokugxila kwinqaku lokuqala, kodwa ngaphezulu kokubheka ngokubanzi kwizibonelelo zokuhamba xa udlala igalofu, ngokuchasene nokukhwela kwinqwelo. Imibutho eminingi yegalufu iqhubela phambili ukuhamba kungekhona nje ngeenzuzo zayo zempilo, kodwa kuba kungcono kwiikholeji zegalufa kunye-ezininzi zichasene-ezingcono kumdlalo jikelele. Kaninzi "
Kukho amanqaku amaninzi kwiwebsite yethu echaza kwaye abonise ukuqeqeshwa okuzenzekelayo ukuze usebenze kwi-golf yakho. Eli phepha libonisa uluvo olujolise kwiimpawu eziza kugolisa. Kaninzi "
Eli nqaku lichaza isimiso esilula esilula ukuba ungayenza kwibhola lokuqhuba okanye mhlawumbi kwi-tee yokuqala, into ekhawulezayo kwaye kulula ukuyifumana umzimba wakho wanconywe igalofu. Isiqhelo saqulunqwa ngumgqirha wamazinyo oye wapapasha iincwadi kwiimpawu zegulane kunye nokulimala kwegalufu. Kaninzi "
Indlela Efanelekileyo Yokufudumala Ngaphambi Kokujikeleza Kwegalofu
Esinye sezihluthulelo zokuphepha ukulimala kwigalfu kukuhamba ngokufudumele. Kwakhona esinye sesitshixo sokwenza kakuhle. Esi sihlandlo se-warmup asibandakanyi nje isincomo sokwenza olunye ulula, kodwa uchaza nalapho uqala khona ukuqhuba kwakho ngaphambi kokuba ujikeleze kunye nendlela yokuqhubela phambili ngendlela oye walungisa ngayo. Kaninzi "
Uhlelo lweGolf Fitness lokubuyela kwiMidlalo
Mhlawumbi ube kude negalufu ixesha elide. Mhlawumbi uhlala kwimeko yemozulu apho kufuneka ubeke iiklabhu kude ngexesha leenyanga zasebusika. Kodwa ngoku ulungele ukuphuma kwiiklabhu uze ubuye kwibala legalufa. Ngaphambi kokuba uyenze, kuthatha ixesha lokunciphisa umzimba wakho kwigalufa kunye nenkqubo yokuzilolonga kwegalufu. Lowo uchazwe apha uhamba kwiindawo eziphambili ukujongana nokucebisa iindlela ezithile zokuzilolonga kunye nokwelula. Kaninzi "
Eyona Ninzi Yokulimala KweGalofu
Ugqirha wamazinyo esikhankanywe ngasentla - lowo oqhelekileyo oqhelekileyo woluhlu olusisigxina - esaye wabhala le nqaku kuthi. Apha, ugqirha uchaza ukulimala okuqhelekileyo kwegalufa, uchaza indlela yokuziqonda kunye nokuba zeziphi unyango olufunekayo. Kaninzi "
Ukuthetha ngokulimala okuqhelekileyo kwegalufa, umva - kwaye ngokukodwa umva ophantsi - udla ngokuba yinkalo yegolfu. Ukunyamekela imva yakho kuthetha ukubeka ingqalelo kwi-golf-fitness - ukufaka ilula kunye nokuzilolonga ekusebenzeni kwakho oku kunokukunceda ukukhusela umva wakho ngokuchasa okanye ukulimala. Kaninzi "
Ingundoqo ingacingelwa ukuba iphakathi kwecandelo. Yonke imisipha, iigaments, kunye namathambo avela ngaphezu kwamadolo akho ngaphantsi kwesifuba sakho. Yaye ingundoqo ibhekiswe kwiimigangatho zayo ngexesha lokuguquka kwegalufu, efuna ukunyuka okuhamba phambili kummandla oyintloko. Ukomeleza ingundoqo yakho inokukhusela ukulimala, kodwa inokuphucula ukuguquka kwakho. Nazi ezinye iindlela zokuqala zegalufu ezijolise kuloo nxalenye yomzimba. Kaninzi "
Ukulungelelaniswa okuKhuselekileyo kunokuncedisa ukuhambelana nokuGuquka kweGalati yakho
Eli nqaku, elibhalwa ngumqeqeshi wempilo yegalufu ukuya kwi- PGA Tour pros, ichaza indlela i-golf swing inzuzo ngayo xa i-golfer iyagxininisa ukuguquguquka kwinkqubo yokugulisa igalofu. Kaninzi "
Imbali ye "Boogie"
Umgaqo-nkqubo: Umda weNBA Umda
Indlela yokucoca iiClubs zeGolf
Ukudibanisa i-Niblick, ifomu eliQala leQela leGalofu
Lixesha elide ixesha leSikhathi seMidlalo saseKhisimusi?
Iimoto zeHybrid - Zonke NgeeBicycle zeHybrid
Yintoni-kwaye iphi i-Church Pews Bunker?
Ukuhamba kweDynamic Moves: iDynos kunye namaPhulo
I-Canisius yeKholeji yeSithombe seKholeji
Iingcebiso eziSiseko zokuKhumbula iintetho, izakhono kunye nokudlala
9/11 Utshintshe i-Code International Building
I-Saltpeter okanye i-Potassium Nitrate Facts
6 Iincwadi Ezinkulu zokuDrafta iincwadi zokuqala
Ziziphi Zonke i-Mormon ezifanele ziyazi malunga nokuThengiswa kokutya
Abaculi abaphezulu be-Canadian Pop Music 'bama-80s
Vumela iMbali Yakho Imidwebo yeChirm Ihlabathi
Yiyiphi i-Optimal Bar Top Height?
Iphrofayli kunye ne-Biography yeMarko uMvangeli, uMbhali weVangeli
3 I-Hilarious Broadway Audition Iingoma zamazwi angamaBhinqa aphantsi
Mayelana neHolo yeHlabathi kwi-Broadmoor World Arena e-Colorado Springs
Funda indlela yokudibanisa "Faka" (ukubeka) ngesiFrentshi
Iingcaphuno ezivela ku-Alice kwiWonderland
Ukufikelela kuma-75 eepesenti yoLutsha lwase-US olungabonakaliyo kwiNkonzo yezempi